ခရစ်ယာန် တို့ သည် အောက်တန်းကျသော စိတ်ဓါတ် ပိုင်ရှင် ~ Knowing the Ture God
4:51 AM Myanmar Elite Hacker 21 comments
သမ္မာ ကျမ်းစာတွင် ရှေ့ နောက် မဆီလျှော်သော အချက်
ဘုရားသခင်သည် ပထမဆုံးနေ့မှာပင် အလင်းရောင်ကို ဖန်ဆင်းတော်မူပြီး အလင်းကို အမှောင်ထုမှ ခွဲထုတ်တော်မူလေသည်။ (၁း၃-၅)
ဘုရားသခင်သည် နေနှင့် ကြယ်တာရာများကို စတုတ္ထမြောက်နေ့တွင် ဖန်ဆင်းတော်မူသည်။ (၁း၁၄-၁၉)
အဲ့ဒီလိူ ရှေ့ နောက်ကိုက်ညီမူ ရှိပါတယ်လို့ သမိုင်းသုတေသီတွေ ထောက်ခံထားတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာက အဘယ့်ကြောင့် လွဲချော်နေလေရသနည်း။
အဲ့ဒီလို ယေရူ ရဲ့ ဟောပြောချက်ကို ကြည့်ရင် သိတာသွားတာတစ်ခုက ဖောရှော ထားတယ် ဆိုတာဘဲ။ လူသားတွေကို ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား လုပ်ပြီး အခွက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ လိမ်ညာ လှည့်ဖျား ထားတယ် ဆိုတာ သိသာလွန်းပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ယေရူဟောထားတာက အလင်းက သတ်သတ် ၊ အလင်းရောင်ပေးတဲ့ နေ ကသတ်သတ် ဆိုပြီး တစ်ခြားစီ ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ ဒါအပြင် အမှောင် သည် ဖန်ဆင်းမူ မဖြစ်တည် ခင်ကတည်းက ဖြစ်တည် တည်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပါဘဲ။ ဒါဆို အမှောင်ကို အဘယ်သူ ဖန်ဆင်းပါသလဲ။
အဲ့ဒီ အချက်မှာတင် အရာခပ်သိမ်း ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ ထာဝရ ငဖြီးကြီး ဟောဖောချက်တွေက လွဲသွားပြီ။ တစ်ခြား ပို့ စ်တွေမှာလဲ လွဲချော်နေတဲ့ အချက်တွေကို ထောက်ပြထားပါတယ်။ ဒါမှ ဆက်လိမ်ညာလျှင်လဲ နည်းလမ်းကျကျ လိမ်လှည့်နိုင်အောင်လို့ ပါ။
ယေရှုသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ခန့်က သမိုင်းတွင် အမှန်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီး... သမိုင်း ပညာရှင်များကလည်း ယေရှု၏ သက်တော်စဉ်တွင် ပြုခဲ့သော ဖန်ဆင်းခြင်းအမှုများနှင့် အထူးသဖြင့် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို လက်ခံ အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ သမိုင်းပညာရှင်ဟု ဆိုရာတွင် တကမ္ဘာလုံးက လေးစားခြင်းခံရသော ပညာရှင်များကိုသာဆိုလိုပါသည်... ဥပမာ ရောမသမိုင်းကိုရေးသာသော ပါမောက္ခ သောမတ်စ်အာနိုး ကဲ့သို့သော သူများ....
ငါးထောင်မကသော လူများ စားစရာနှင့် သောက်စရာတို့ကိုဖန်ဆင်းပေးခဲ့၊ သေသောသူများကို အသုဘလိုက်ပို့သည်မရှိ..ပြန်ရှင်စေခဲ့၊ မွေးရာပါ ကိုယ်အင်္ဂါ ချို့တဲ့သူတို့အား.. ပကတိပြန်ဖြစ်စေခဲ့... ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကို ရေးသားပါက မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင် များပြားမည်ဟု ကျမ်းစာက မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။
အဲ့ဒီလိုဆို ကျွန်တော် တိုက်တွန်းချင်တာက ရောဂါ ဘယ တွေ ဖြစ်လာတိုင်း ယေရူ ကိုသာထိုင်ဆဲပါလို့ ။ အဲ့ကောင်ယေရူု မကောင်းတာတွေ မှန်သမျှ အကုန်လုပ်နေတယ်။ အဲ့သည်လို ပြောတော့ ခရစ်ယာန်တွေ ပြန်ပြောတယ် ဗျ - - - - ဆောက်ရှက် တစ်စက်မှ မရှိတဲ့ ဘာသာ။
အရာအားလုံးပြည့်စုံနေက ဘုရားဟူသည် မလိုအပ်တော့ပါ.. မကောင်းမှုမှန်သမျှ မာရ်နတ်ထံကလာပါသည်... ဥပမာ ဘုရားနှင့် ဝေးနေသော မိသားစု သူတို့ ၏တစ်ဦးတည်းသောသာ နာမကျန်းဖြစ်ကာ ဆရာဝန်လက်လျှော့သောအခါမှ ဆုတောင်းပေးကြဖို့ ဘုရားကျောင်းကိုပြန်ရောက်လာပါသည် မကောင်းပေးဘူး လား... ဝေါထရိတ်စင်တာကြီး ပျက်စီးသွားတာ မကောင်ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ နောက်နေ့မှာ ဘုရားကျောင်းတွေ လူမဆံ့တော့ဘူး.. ကျမ်းစာအုပ်တွေ ၀ယ်မရ တော့အောင် ပြတ်သွားတယ်.. .မကောင်းပေးဘူးလား...
ကဲကောင်းကြသေးရဲ့ လားဗျာ ။ အဲ့သည် လိုကြီးပြောလိုက်တော့ ရင်ထဲကို ဆို့ . . . သွားတာဘဲ။ အပူအပင်တွေ ဖြစ်တည်လို့ သူ့ ဆီရောက်လာလျှင် သူပျော်တယ်တဲ့။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေတော့ အဲ့ဒါကို ပျော်တယ်တဲ့။ ကျွန်တော် အဆင့်နိမ့် မိရိူးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦးအနေနဲ့ တော့ ဘယ်လိုမှ မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ သူတစ်ပါး ခဗျာ အပူအပင်နဲ့ သူတွေ များများလာရင် ပျော်တယ်တဲ့။
ဥပမာ - ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ မီးလောင်လျှင် အားကိူးတကြီး အကူအညီ တောင်းခံရလေ့ရှိတဲ့ မီးသတ် ရဲဘော်များ ပျော်ပါး ရွှင်မြူးနေလေ့ရှိပါသလား။ တွေ့ ဘူးပါသလား ။ မြင်ဘူး ပါသလား။ ရှိကော ရှိပါသလား။
အဲ့လို အဖြစ်ဆိူးမျိူး ရှိလာလျှင် မီးသတ်ရဲဘော်တွေလည်း ပြည်သူတွေ နှင့်ထပ်တူ ထပ်မျှ ဝမ်းနဲပြီး အသက်ကို ပဓာန မထားဘဲ ငြိမ်းသတ် ကူညီတာပါဘဲ။ အများပြည်သူ ပျော်ရွင်စေအောင် ၊ စိတ်သောက လျော့နည်းအောင် သူတို့ အတက်နိုင်ဆူံး ကြိူးစားတာပါဘဲ။
နောက်ထပ် သာဓက တွေ ထပ်မပြောတော့ပါဘူး ။ ခရစ်ယာန်တွေ အရမ်း သိမ်ငယ် သွားကြမှာ စိူးလို့ ပါ။
အဲ့ဒီ အချက်ကို ကြည့်လျှင် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေ ရဲ့ ဓိတ်ဓါတ် အဆင့်အတန်း ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ဆိုတာ စာရေးသူ ခန့် မှန်းမိပါတယ်။ အထင်သေးသွားတယ်။ အမြင်သေးသွားတယ်။ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် အဆင်သာရှိတဲ့ စာရေးသူတောင် အဲ့လို စိတ်မျိူးမထားနိုင်ဘူးဗျာ။ သူတို့ လို မပျော်နိုင်ဘူးဗျာ။ အရမ်းကို အောက်တန်းကျ တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေဗျာ။
Lisu Tgi says:
November 14, 2012 at 7:37 AM Reply
အိုမိတ်ဆွေ သင်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်မယ်ဆိုရင်တောင် အောက်တန်းကျသော စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ဖို့သေချာတယ် ဗုဒ္ဓဟောထားတာကိုကြားဖူးသလောက်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာနိဗာန်ရောက်ဖို့ပါပဲ ရုပ်/နံရှိသေးသရွေ့
ဒုက္ခနဲ့လွတ်နိင်မှာမဟုတ်ဘူးလေး ဒါကြောင့်နိဗာန်ကိုရောက်ဖို့ ၀ိပဿနာတရားကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက
အပတ်တကုတ်ကြိုးစားအားထုတ်နေချိန်မှာ သင်ကဘယ်ဘာသာက အောက်တန်းကျတယ်၊ဘယ်ဘာသာက သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်၊
သူများဘာသာကိုလေ့လာပြီး အားနည်းချက်တွေကို ရှာပြီးထုတ်ဖော်နေတယ်ဆိုတော့
သင့်ကိုတစ်ခုမေးမယ် လူကဘယ်ကဖြစ်သလည်းဆိုတာဖြေပေးပါ သိပ်သိရင်ပေါ့
တကယ်လို့မျောက်ကဖြစ်လာတယ်လို့သင်ဖြေရင်တော့ ယုံကြည်ရင်တော့ အဲဒီပြောတဲ့သုတေသီ ပညာရှင်ကသူကဘယ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်လည်းဆိုတာကိုပါ
တကယ်လို့ သင်ဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာ နိဗာန်ရောက်ဖို့ပါပဲ ရုပ်/နံရှိသေးသရွေ့
အောက်တန်းကျသော စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် သူများခန္ဒာကိုမကြည့်ပဲ
မိမိခန္ဒာကိုကြည့်ပြီး ဗုဒ္ဓ၏ဟောပြောဆုံးမထားတဲ့အတိုင်း ရုပ်/နံကိုသေချာရူမှတ်ပြီးနိဗန်ရောက်ဖို့ပဲကြိုးစားပေတော့လို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်
ငါလိုးမသားတွေ မင်းတို့ကိုမင်းတို့ ဘာများ ထင်နေလို့လဲ။ဘာများတတ်လို့လဲ။မနေ့တစ်နေ့ကမှလူဖြစ်လာတာ။
မင်းတို့က ဆရာကြီးလား။ဒီ ကမ္ဘာမှာ ပထမဆုံးမင်းတို့ လူအရင်ဖြစ်လို့လား။မင်းတို့ကဘယ်လောက်သိလဲ။
မင်းတို့အမေအဖေဖင်ကိုတက်ချမယ် ကုလားတွေလဲမင်းတို့မနိုင်တော့ဘူးမလား။ စောက်ရှက်မရှိ ဘဲ လိုက်မလုပ်နဲ့။
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဒီလောက်စိတ်ဓာတ်ကျ အောက်တန်းစားဖြစ်မယ်လို့ တောင်မယုံထားတာဗျာ...
chin ko ko says:
February 12, 2013 at 5:18 PM Reply
February 23, 2013 at 8:55 AM Reply
အော် စာရေးဆရားကြီးက တော်တော် အဆိုးမြင် ဘက်ကလေ့လာ ထားတာ ဘဲ။ ချီးကျူးမိပါတယ်။ ဒါပယ်မဲ့ သင်ဟာ သင့်ကို ဖန်ဆင်းထားတဲ့ ထာဝရ ဘုရားရှင် ကို ပြစ်မှား နေပြီ။ ဘုရားရှင်ဤသားကို ခွင့်လွတ်ပေးတော်မူပါ။ မိတ်ဆွေ မေတ္တာတော်ရှင်ဘုရားက သင့်ထက် ဆိုးဝါးစွာ ခရစ်တော် နှင့် နောက်လိုက် တွေကို တိုက်ဖျက် ခဲ့တဲ့ ရှောလု ကြီးကို ခွင့်လွတ်လျှက် သူ.ရဲ. နိုင်ငံတော် ကျယ်ပြန်.ဖို. တမန်တော်ကြီး ရှင်ပေါလု အမည်ဖြင့် အသုံးပြု ခဲ့ သလို မိတ်ဆွေ ကို အသုံးပြု ပါစေ လို. ဆုတောင်း ပေးလိုက် ပါတယ်။
win laylay says:
March 18, 2013 at 4:08 AM Reply
မင်းကခရစ်ယာန်ကိုစော်ကားရအောင်မင်းကရောမင်းဘာသာအကြောင်းဘယ်လောက်သိနေလို့လဲ သိရင် ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်နဲ့ခုနှစ်အတိကျငါ့ကိုရှင်းပြ အလကားနေရင်းဘာသာကိုလာမစော်ကားနဲ့ မင်းတို့ဗုဒ္ဓတွေဘုန်းကြီးကျောင်းတောင်တနေ့ကိုတခေါက်ရောက်လို့လား
အိုမီဂါ လေး says:
April 6, 2013 at 5:02 AM Reply
ကြိုက်တယ် အားပေးတယ် ဆက်သာလုပ်....ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေဟာ သတ္တ၀ါ အားလုံးအပေါ်မှာ မေတ္တာကို ရှေ့ထားပြီး..သိပ်တော့အပြောမရက်စက်နဲ့ပေါ့ဗျာ..တခြားဘာသာတွေလဲ သနားပါတယ်...ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင်မှ ချွတ်လို့ရတဲ့သတ္တ၀ါတွေကို သာ ကျွတ်တန်း ၀င်စေပြီး..ချွတ်လို့မရတဲ့ သတ္တ၀ါ တွေကိုဒီအတိုင်းထားခဲ့သေးတာပဲ....ဒါကြောင့်မို့လဲ အရင်က မကျွတ်ခဲ့အခုထိကျွန်တော်တို့ လူဖြစ်နေသေးတာပေါ့.....အမုန်းမပွားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ အကို ရာ....မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စားပဲလေ.....ကြားထဲက ကိုယ်ပဲအကုသိုလ်များပါတယ် ........ဒါပေမယ့် အားတော့ပေးတယ် ဘာသာရေး အကြောင်းတွေ ရေးတာတင်တာကို
April 6, 2013 at 5:31 AM Reply
May 23, 2013 at 10:00 AM Reply
October 28, 2013 at 11:44 PM Reply
November 1, 2013 at 11:36 AM Reply
အော်လူတွေလူတွေ ဘာကြောင့်ငါဆိုတဲ့စိတ်ကိုဆွဲကိုင်ထားကြတာလဲ သင့်ညဏ်ကဘယ်လောက်မှီလို့သူသပါးကိုလိုက်ပြီး ကဲ့ရဲ့နေတာလဲ
စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ ဖုန်းတစ်လုံးဟာ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ ဘာကြောင့်ပြောဆိုလို့ရနေတာလဲ
ဖုန်းလိုင်းဆိုတာဘာလဲ တီထွင်သူကဘယ်လိုတီထွင်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ ဆိုတာကိုသင်အရင်လေ့လာပါဦး သူ့ဘုရား ကိုယ့်ဘုရား လို့ပြောရအောင် သင့်မိဘမျိုးရိုးဆင်ဆက်နာမည်ကိုအရင် မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါဦး ငါ့အမေကဘယ်သူ အဖေဘယ်သူ အဖိုး အဘိုး တစ်ဆင့်ဆင့် သင်စာရင်းလိုက်ကောင်နိုင်ရင်အဆုံးသတ်မှာ အစဦးဆုံးဖြစ်သူဟာ ဘယ်သူလဲ အစဦးဆိုတာဘယ်ကဖြစ်လာတာလဲ သင်သိမယ်ဆိုရင်တော့
သင်ပြောပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် သင်ရဲ့ဘုရားကိုသင်သိလ်ိမ့်မယ် သင်ပြောပြောနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ
ခရစ်ယာန် မွတ်ဘုရား ဘုရားအကုန်လုံး အကြာင်းမပြောနဲ့ လူကဘယ်ကဖြစ်လာတာလဲဆိုတာတောင်ဘယ်သူသေချာပြောနိုင်လဲ လို့ပြောချင်တယ် ဒါကြောင်
စာရေးခြင်တယ်ဆိုရင် သေချာစဉ်းစားပြီးရေးတာ အကောင်းဆုံးပဲလိုပြောချင်တယ် မင်းကျောင်းနေဖူးတယ်ဆိုရင်ပေါ့ ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုကိုယ်မဖော်ချင်စမ်းပါနဲ့ မင်းကြောင့်မင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ခုလုံး ၀ိုင်းကဲ့ရဲ့ခံရလိမ့်မယ်
ney si sai says:
June 12, 2014 at 9:45 AM Reply
nayminn khant says:
June 3, 2015 at 2:05 PM Reply
လူဘယ်ကစဖြစ်လဲမေးတဲ့လူ လူစဖြစ်တာမျောက်ကစဖြစ်တယ်လို့သိပ္ပံသဘောထားကိုလက်ခံသည်ပဲထားပါတော့ အပျိုကကလေးမွေးတာက သိပ္ပံလောက မှာ လုံးလုံးမရှိဘူးလေ ဒါကို လိမ်တယ် လို့ပြောရမလား ထားပါတော့ ဗုဒ္ဓ ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကို လေ့လာကြည့်ပါသုဂတောဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော် ရဲ့ဆိုလိုရင်းက မှန်ကန်၍အကျိုးရှိသောစကားသာပြောဆိုတော်မူခြင်း ဒါကို ခဏထား ဘုရားလက်ထက်လူကဘယ်ကစဖြစ်လဲမေးသူရဲ့အဖြေကိုဘုရားရှင်မဖြေ ပါ အကြောင်းမှာ ဂုဏ်တော်မှာပါပြီးသား လူဘယ်ကစဖြစ်တယ်လို့ဖြေမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တယ် ဒါပေမယ့် ဘာအကျိုးရမှာလဲ မျောက်အုန်းသီးရသလိုပဲ ဖြစ်နေမှာ နဲနဲတော့စဉ်းစားလေ ရမ်းမတုတ်နဲ့
July 2, 2015 at 9:23 AM Reply
သိပ်​မကြမ်းပါနဲ့ သူတို့​လေး​တွေက မလိမ်​မိုးမလိမ်​မာ​လေး​တွေပါကွယ်​
Lovely Siam says:
July 14, 2015 at 11:04 PM Reply
အဲဒီလူကပြောတော့ လူက မျောက်ကဖြစ်တယ်လို့ သူက ယုံတော့ လည်ဘယ်တတ်နိင်မလဲနော် သူ မျောက်မျီုးပေါ့
Duty Love says:
October 6, 2015 at 1:03 PM Reply
October 14, 2015 at 6:24 AM Reply
ကျမ်းစာကို အပေါ်ယံပဲကြည့်ပြီး ရမ်းပပြောပါနဲ့မိတ်ဆွေရာ။
ကျမ်းစာကို မိတ်ဆွေရဲ့လက်ရှိညဏ်နဲ့ လေ့လာနေရင် ဘယ်လိုမှအနက်အဓိပါယ်မှန်ကို သိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အဲ့လိုပြောလို့ မိတ်ဆွေကြီးက ညဏ်မကောင်းဘူး၊ပညာမရှိဘူးလို့မဆိုလိုပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီကျမ်းစာကို ဒီညာဏ်နဲ့ပဲ ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ အမှန်ကိုနားလည်မှာမဟုတ်တာတော့ သေချုာပါတာယ် မိတ်ဆွေ။ ဘုရားပေးတဲ့ ဝိညာဉ်တော်နဲ့မှ အနက်အဓိပါယ်ကို သဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းသာ ခရစ်ယာန်တွေကအောက်တန်းကျတယ် ဘာညာနဲ့ပြောနေရင်တော့ တကယ်ပညာရှိတဲ့လူတိုင်းကပြောနေပါလိမ့်မယ် သင်သာလျှင် အောက်တန်းကျတဲ့သူပဲ လို့ပေါ့။
မိတ်ဆွေကြီးကို ဘုရားက ညဏ်ပညာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
December 1, 2015 at 3:43 AM Reply
December 1, 2015 at 3:48 AM Reply
April 12, 2016 at 6:13 AM Reply
ဘယ်လောက်ဘဲ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ဆော်ကားထားပါစေ ဘာသာဝင်တွေက မင်းကိုဘဲပြန်ဆဲတာ မင်းတို့ဘာသာကို ပြန်မပုတ်ခတ်ပါဘူး
ဒါကိုကြည့်ရင်ဘဲ တော်၂လေး နားလည်သင့်နေပြီ
မင်းတို့ဘာသာကို ဆော်ကားထားတဲ့ post တွေ article တွေမှာ commentတွေက ဖတ်ဖို့တောင် မသင့်တဲ့စကားတွေနဲ့ ဆဲထားတယ်
ဘာသာခြားတွေကို ဆော်ကားနေတာက ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးဘာသာအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတဲ့ မင်းတို့ဘာသာ ဂုဏ်သိက္ခာ မညှိုးနွမ်းပေဘူးလား 😣
January 22, 2017 at 5:54 PM Reply
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဘာသာကောင်းမကောင်း ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အပြောအဆိုအရေးအသားကို ကြည့်တာနဲ့တင် သိသာပါတယ် လူတစ်ယောက်ဆိုတာ သူ့ဘာသာကို မကိုးကွယ်ရင်နေ မပုပ်ခက်ပါနဲ့ အောက်တန်းကျလွန်းပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့တော့ သူများဘာသာကို အဲလိုမပုပ်ခက်တတ်ဘူး ဒီလိုဘာသာရေးအပုပ်ချရေးတဲ့သူတော့ ဘုရားသခင် ဆုံးမပါစေ ကောင်းချီးပေးပါစေ